မြန်မာဝီကီပီဒီယားအရေး | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
မြန်မာဝီကီပီဒီယားအရေး	Posted by mm thinker on July 19, 2008
Posted in: MOE, Sharing, Wikipedia.	Tagged: MOE, Wikipedia.	မြန်မာဝီကီပီဒီယားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၀မ်းသာ ၀မ်းနည်းရော၊ အားရ အားမရရော၊ နားလည် မလည်ရော ဖြစ်နေတုန်း ဘလူးဖီးနစ်ရဲ့ အဖိုးတန်ရှင်းပြချက်တွေ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ မြန်မာဝီကီပီဒီယား တခန်းသစ်ဦးမယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ပို့စ်နှစ်ခုကို မဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက် လက်တို့ချင်ပါတယ်။
← တပ်ဦးကို ဘယ်သူချွန်းဖွင့်မလဲ	ဒီမိုကရေစီ (Democracy) →	Pages	about